Firavana alina amin’ny asa Velon-taraina ireo mpiasa noho ny tsy fisian’ny Taksibe
Mpiasan’ny orinasa tsy miankina iray mitaraina mikasika ny tsy fandriampahalemana manodidina ny toeram-piasany eny Tanjombato.
Raha ny filazany, vao talohan’ny fetim-pirenena izy no very poketra sy finday nandritra fifanosehana taksibe. « Misy fotoana amin’ny 7ora 30 mahery eo foana vao vita ny asa rehefa manenjika entana izahay. Misy fotoana aza efa hatramin’ny 8ora alina. Mibosesika ny mpiasa amin’izany, ny fiara mpitatitra efa miha vitsy. Amin’io no manararaotra tanteraka ny mpangarom-paosy ka nahavery ireo fananako ireo. Mbola olana miandry anay ihany koa ny fialana taksibe ka hihazo ny elanelantrano hodiana. Misy ihany ireo mpitsena saingy matahotra noho ny haizina tsy misy jiro, tahaka anay mody eny amin’ny faritra mafana Manjakaray sy Anjanahary iny. Ankoatra ny fijeren’ny fanjakana akaiky ny karama farany ambany indrindra, tokony harahiny maso ihany koa ireo orinasa mampiasa olona, indrindra amin’ny alina mahakasika ny fitaterana manokana», hoy i Marie Jeanne Rasoarimalala.
Nilaza ity renim-pianakaviana ity fa noho ny fahasahiranana amin’ny fitadiavan’asa dia mitazona izay kely ananana aloha izy mba hivelomana. Anisan’ireo tonga nijery ny asa sahaza azy izy tamin’ny « SER’B ASA » teo amin’ny tranohevan’ny Lapan’ny fanatanjahantena sy kolontsaina Mahamasina, ny faran’ny herinandro teo. Kely anefa ny fanantenany hahita asa manoloana ireo vahoaka sy ambony diplaoma tonga nilahatra nandritra ny zoma sy sabotsy teo. Miandrandra famoronana asa ny vahoaka fa tsy fanangonana antontan-taratasy izay tsy ho hita ny tohiny.